क्यान्सरलाई जितें अब अधिकारको लडाइँ जित्नु छ ….. « Janata Samachar
क्यान्सरलाई जितें अब अधिकारको लडाइँ जित्नु छ …..
प्रकाशित मिति : 8 July, 2019 12:30 pm
जतिबेला उसले दाइजो थोरै ल्याएको भन्दै ममाथि तुच्छ बचन लगाएर पिट्न सुरु गर्याे । छाँगावाट खसे जस्तै भएँ र आखाँबाट आँशुमात्रै बगिरहे । बोलि बन्द भयो । कुनै कुराको प्रतिकार गर्ने आँट आएन म मा । सोचेकी थिएँ, सुहागरातको प्रहरसँगै सुरु होला नयाँ जीवनको गुल्जार । तर भएको पनि उजाडियो ।
“रातको १२ बजेको छ । छटपटी भइरहेको छ । छातिको घाउ चर्किंदा त्यो दुखाईले कतिपटक मुर्छा परेँ, आफैलाई थाहा छैन । स्तनको अप्रेसन गरेर थला परेकी म, मध्य जेठको टन्टलापुर गर्मी र प्यासले प्याकप्याक्ति हुँदा एक घुट्को पानीसमेत पिउन पाएकी छैन् ।
तीन तलाको घर परिवारका सबैजना माथिल्लो तलामा । अनि म दोस्रो तलामा एक्लै । साथमा भएको मोबाइल लिएर पटक – पटक फोन गरेँ । पालैपालो म्यासेज गरेँ । तर अहँ ! कुनै ‘रेस्पोन्स’ आएन । मध्यरातमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए या सबै जनाले निदाएजस्तो गरे ? उनिहरु नै जानुन् ।
दाहिने स्तनको घाउको दुखाई भन्दा बढी थियो, उनीहरुको व्यवहारले देब्रे छातिमा थपिइरहेको पीडा । घाउको दुखाई, प्यास र मनको पीडाका अथाह आँशु यी एकैपटक आँखाबाट बरबर्ती कति बगे कति । ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ र सुन्छ’ भन्ने नेपाली उखान भएपनि मेरो यो रुवाई र छटपटीको चिच्याहट आफ्नै भनिनेहरुले त सुनेनन्, बिचरा त्यो भित्ताले के सुन्थ्यो ?”
यसरी राधाले एकै श्वासमा आफ्नो जीवन भोगाइका तथ्यगत वृतान्त सुनाई । सायद उ, आफ्नो मनमा गुम्सिएका सबै बह एकएक गर्दै पोखेर हलुका हुन चाहान्थी । उसका सपनाहरु केवल सपना मै सीमित रहेको उसको निश्कर्ष छ । तर जुन कुरा उसको कहिल्यै सपनामा पनि थिएन, त्यही विपना बनेर आइदिएको छ राधाकाे जीवनमा । राधा अगाडि भन्दै थिई, म सबै एक टकले सुनिरहेँ ।
उनि अगाडि भन्न थालिन्…..
“कुरा २०७५ जेठ १६ गतेको हो । दाहिने स्तनमा देखा परेको ट्युमरलाई फालेर घरमा आएकी थिएँ । बुवाले खानुपर्ने आवश्यक खाना जोहो गरेर जानुभएपनि साथमा भएको पानी सकियो । तर परिवारका कुनै सदस्य कस्तो छ ? भनेर एक पटक सोध्न समेत आएनन् । मान्छे कसरी यति निर्दयी बन्न सक्छ होला ? ज्यान सञ्चो हुँदा त हरेक दिन कुटपिट, गाली गलौज र यातना कति सहेँ कति । तर मनमा झिनो आशा थियाे कि, बिरामी पर्दा त कमसेकम कस्तो छ भनेर सोध्न आउलान् । अपसोच न श्रीमान आए न त परिवारका अरु कोही सदस्यले नै मेरो पीडा
बुझ्ने प्रयत्न गरे ।
यही बखत सम्झिएँ । स्व.तारादेवीको गीत …
सोंचेजस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन
जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखेजस्तो हुन्न जीवन
“हुन त यो गीतको आफ्नै कथा, व्यथा र पृष्ठभूमी थियो होला । तर आज आएर यो गीत मेरै लागि लेखिएजस्तो लाग्यो । रेडियोमा यो गीत बज्दा मैले सोचेजस्तै बनाउनु छ जीवन भन्दै गुनगुनाउने गर्थें । मैले नि एउटा सपना बुनेकीे थिएँ । ”
महिलालाई बजारको गुडियाको रुपमा मोलमोलाई गर्ने उसको प्रवृतिको अन्त्य गर्ने उपाय खोजिरहेकी छु । विवाहको तीन महिना बित्दै श्रीमानको निरन्तरको कुटाई तथा क्यान्सरसँग लडेको एक वर्षको यात्रा महसुस गर्ने तागत सायदै मान्छेसँग होला । तर सहज परिस्थितीमा आफ्नो भलाई खोज्ने, कर्तव्य पुरा गर्नबाट भाग्ने, महिलालाई खेलौना सम्झने ऊ जस्तो मानवको नाममा कलंकलाई सजाय नदिलाउँदासम्म शान्ति हुने छैन मेरो मन । आफ्नो अधिकारको लागि लड्न सक्ने भएकी छु ।”
“जब घरमा विवाहको कुरा चलेको थियो । सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय बुवाआमाले सोही क्षेत्रमा नै काम गर्ने केटाले नै छोरीको मनोभावना सजिलै बुझ्ला भन्ने महसुस गर्नुभयो । उ बेला बिहेबारे मलाई केही थाहा थिएन । हुन त उनीहरु अर्कैलाई हेर्न आएका रहेछन् । तर नजर म माथि परेछ । मेरो मागि विवाह भयो । २०७४ फागुन २९ गते राती टिकाटालो लगाएर ३० गते म विवाहको बन्धनमा बाँधिन पुगेँ, काठमाडाैंको हनुमान ढोका बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था, न्यूरोड पशुपति प्लाजामा व्यवस्थापकको काम गर्ने अस्मिन भट्टराईसँग ।
हेर्दा हतारमा विवाह गरेको देखिएपनि केटा पक्षले मेरोबारे बुझ्न कुनै कसर बाँकी भने राखेका थिएनन् ।
एउटी छोरी मान्छेले विवाहपछि जीवनमा विभिन्न नाम र उपनामहरु पाउने गर्दछन् । ठिक त्यसै । स्वभावैले म पनि छोरीबाट श्रीमती मात्रै होइन, बुहारी, भाउजु लगाएत अन्य विभिन्न नाता एवं सम्बन्धमा जोडिन पुगेँ । आगामी जीन्दगी श्रीमानको मायामा जीवनको खुसीयालीमा हराउने र खुसीसाथ जीवन बिताउने कल्पना कति गरेँ कति ।
“एकबारको जुनिमा अनेकौं उमंग, खुसी र सुख बटुल्ने सपना बुनेपनि आज मेरो कल्पना र सपनाबाट धेरै पर गएको छ मेरो जीवन ।”
“विवाहको पहिलो रातको रङ्गीन कल्पना मैले पनि नगरेकी कहाँ हुँ र ? ऊ आउला र मेरो घुँघट हटाएर भन्ला, ‘तिमी मेरी हौ ।’ प्रेमले सुम्सुम्याउँला अनि म उसैमा समाहित हुँला !
तर त्यो केवल मेरो स्वप्नमा मात्र सिमित रह्यो । जब मैले सुहागरातमा उसको प्यार होइन, अभद्र व्यवहार भोगेँ अनि थाह पाएँ, मेरा रंगीन सपनाहरु त केवल सिसाबाट निर्मित रहेछन् । जसले जीवनको आँखिझ्यालमा अडिन नै नपाई फुट्नुपर्यो ।
जतिबेला उसले दाइजो थोरै ल्याएको भन्दै ममाथि तुच्छ बचन लगाएर पिट्न सुरु गर्याे । छाँगावाट खसे जस्तै भएँ र आखाँबाट आँशुमात्रै बगिरहे । बोलि बन्द भयो । कुनै कुराको प्रतिकार गर्ने आँट आएन ममा । सोचेकी थिएँ, सुहागरातको प्रहरसँगै सुरु होला नयाँ जीवनको गुल्जार । तर भएको पनि उजाडियो ।
“बाबा दाइजो नलिई विवाह गर्ने हो मैले सधै भन्ने गर्थे । र विवाहको समयमा दाइजो नलिने केटासँग नै सहमती पनि भएको थियो । तर खै के भएछ पछि मेरो ढोलीसँगै पछिपछि लागेका थिए दाइजोका सामान पनि । ”
“तर अचम्म के भने दाइजोका सामानहरु मैले देख्न नै पाईन । कुन्नी कहाँ गायब भए ति सबै चिज ? न कपडा राख्ने दराज भेट्छु, न सुत्ने बेड तथा विस्तरा । केवल सुनिरहनुपर्थ्याे दाईजो कम भएका भनाइहरु र जेठानी, देउरानीलाई गहना नदिइएको र सासुआमाको कचकच । अनि रातमा श्रीमान भनाउँदाको पिटाई । ”
राधाले आफ्ना तीता भोगाइहरु सुनाइरहँदा मलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि, उसले कुनै हिन्दी टेलिसिरियलको कुरा गरिरहेकी छे । दक्षिण भारतीय फिल्ममा देखाइएको कुनै दृश्य र पात्रको बारेमा मलाई बताइरहेकी छे । जुन प्राय फेमिली म्याटरहरुमा बनाइन्छन् । तर उसले सुनाएका सबै कुरा उसका आफ्नै वास्तविकता नै थिए । उसका पीडालाई सायद मेरा शब्दहरुले समेट्न सक्दैनन् ।
“सोचेका सबै सपना क्षणभर मै चक्नाचुर भएका त थिए नै । तर पनि आफ्नो हिंसाको विषयमा बोल्ने पनि बाटो पनि बन्द गराईदिए उनीहरुले । अरुलाई सम्झाउन जति सजिलो हुन्छ त्यो भन्दा कयौँ गुणा गाह्रो हुँदो रहेछ आफूलाई सम्हाल्न । र आफैलाई पर्दा आफ्नै बारेमा बोल्न ।”
“आफूलाई दिएको दबाब, र घरको कुरा परिवार (माइती) लाई सुनाएँ । काठमाडौँमा बस्दै आएका दिदी र भाइहरु समेत सुरक्षित नहुने देखियो । पिटाई र धम्कीले निरन्तरता पाइरहे मेरो जीवनमा । सधैं रातको १२ बजे घरमा आउने र साथी संगत पनि त्यस्तै थियो उसको । समूह बनाएर हिँड्ने आवारा प्रवृत्तिले म वाक्क नै भएँ । परिवार सहितको निरन्तरको धम्कीले दिदी र भाइलाई केही हुन्छ कि भन्ने डरले गर्दा उसको पिटाई खानु र यातना सहनुको अर्को कुनै विकल्प थिएन मसँग ।”
मलिन अनुहारका साथ आफ्ना दर्दहरु सुनाई रही राधा ।
“ हरेक दिन शारीरिक र मानसिक चोटमा बित्दै थिए । पुरै शरीर सधैं दुखिरहन्थ्यो । आफुलाई के हुन लागेको छ आफैलाई पत्तो हुँदैनथ्यो । सायद अर्धचेतन अवस्थामा भएर होला । श्रीमानका लात्तीका वर्षाहरुलाई सहजै लिएका हातखुट्टाले आराम खोजिरहेका थिए ।”
“स्तन बेस्सरी दुख्यो सहनै नसक्ने गरी । दुखाई कम होला भन्दा दिनदिनै बढ्दै गएपछि दिदिलाई साथ लिएर अस्पताल पुगेँ । आवश्यक चेकजाँच सबै भयो । चिकित्सकले स्तनमा फ्क्याट कलेक्सन छ, आत्तिनु पर्दैन भन्ने सल्लाह दिए । तैपनि स्वाथ्य क्षेत्रमै आवद्ध दिदीले शल्यक्रिया नै गर्ने निधो गर्नुभयो ।
अस्पतालमा भर्ना हुँदा होस वा अप्रेसनको समयमा । धेरै पटक फोन गरेर म अस्पतालमा छु, आउनु न भन्दा उ एक पटक पनि आएन ।
“अब शल्यक्रियापछि निको होला भन्ने अपेक्षा सबैको थियो तर चिकित्सकले भने अनुसारको फ्याक्ट कलेक्सनमा क्यान्सर देखिएछ मलाई । छोरीलाई घरमा लैजानु । उसलाई जति खुसी दिनुहुन्छ, दिनुहोस । उसको अवस्था कमजोर भइसकेको छ । भनेर भनेर डाक्टरले भन्दा पनि मेरा लागि खुसी खोज्दै आशुँ लुकाएर हिड्नुभयो बुबा ।”
“एउटा सन्तान जन्माउनु, हुर्काउनु, पढाउनु, र उमेर पुगेपछि उत्ती नै खर्च गरेर विवाह गरिदिनु हाम्रो समाजमा चलिआएको चलन हो । छोरीलार्ई विवाह गरिदिएपछि एउटा जिम्मेवारी पुरा गरेको महसुस गर्ने अन्य अभिभावकले जस्तो मेरो बुबाले कहिल्यै गर्नुभएन ।अस्पतालबाट घरमा लगेर परिवारलाई सबै जानकारी गराई मलाई पनि नआत्तिनु भन्नुभयो । म भोलिपर्सी आउँछु भन्दै विदा हुनुभएको बुबा मेरै निम्ती अर्को मिर्मिरमैे पानी बोकेर आउनुभएको थियो ।”
उसको परिवारको राम्रो सहयोग नभएपनि भिनाजु र बुबाले भारतको राजीव गान्धी अस्पतालमा मलाई चेकजाँचको लागि लैजानुभयो ।
मैले जीवनमै कहिल्यै बिर्सन नसक्ने र सबैभन्दा भारी दिन त्यहीँ आयो । जब म शौचालय गएकी थिएँ । बुबा र भिनाजुले बाहिर कुरा गर्नुभएको सबै आवाज प्रस्ट सुनिरहेकी थिएँ । सायद म शौचालय गएको थाहा नपाएर होला, मैले नसुन्ने गरी कुरा गरिरहनुभएको थियो । शौचालय बाहिर निस्कन ढोका के खोल्न लागेकी थिएँ, आकास खसेको र धर्ती नै भासिएको आभास भया मलाई । र आखाँबाट बर्सिन थाले आँशुका ढिक्काहरु !
क्यान्सर चौथो चरणमा पुगेको, उपचारले निको हुने वा नहुने एकिन नभएको कुरा सुन्नुपरेको अहिले सम्झिँदा नि आँशु झर्छ । दिल्लीमा हुँदा पनि धेरै पटक फोन गरेँ उसलाई । यस्तो भएको छ, तपाई एक चोटी आउनुस् भनेर । उपचार खर्च जोड्न बुबालाई गाह्रो हुन्छ भन्दा तेरै बाउ धनी छ, जग्गा बचेर उपचार गर्न भन्यो । मैले घर किनेको पैसा अझै बुझाउन सकेको छैन म आउन सक्दिन भन्दै फोनमा झर्कियो उल्टै ।
म एकातीर मृत्युको मुखमा पुगीरहेकी थिएँ । अर्कोतीर आफैले सिन्दुर हालेर सात फेरो घुम्दै अग्नी साक्षी राखेर कसम खाएको मान्छेलाई मेरो कुनै वास्ता थिएन । जसलाई पुरै जीवन सुम्पिएर आएकी थिएँ, उसैको न राम्रो बचन न त साथ ।
किमोथेरापीले भन्दा बढि सिथिल उसैका बचनले बनाउँथे मलाई । सायद भाग्यमा बाँच्न लेखेको रहेछ । परिवार तथा साथीभाईको साथ र मायाले नै हो की, म मृत्युको मुखबाट जोगिएर फर्कें र पुर्नजीवन पाएँ ।
“भोगाई र संघर्षले जीवनलाई नयाँ मोडतर्फ अगाडि बढाएको छ । हिंसा र क्यान्सर रोगसँग पोंठेजोरी खेल्दाखेल्दै पाएको नयाँ जीवनलाई सामाजिक क्षेत्रमा लगाउने भन्दै राधा क्यान्सर सचेतना फाउन्डेसन बनाएर स्तन क्यान्सर विरुद्धको अभियानमा लागेकी छु । २०६५ देखि शुरु गरेको सञ्चार यात्रालाई निरन्तरता दिँदै रेडियो मध्यविन्दुमा महिला हक अधिकारका विषयमा कार्यक्रम चलाउँदै आएकी छु ।”
“विरामी हुँदा होस वा अघिपछि मेरो कुनै जोर चलेन, उसको जीवनमा । अहिले निको भएपछि मैले यति पैसा दिन्छु छोडपत्र दे र तेरो फाउण्डेसनलाई पैसा आउने वातावरण मिलाईदिन्छु भन्दै विभिन्न बाहनामा तनाव दिईरहेको छ । पटक – पटक परिवार, आफन्त र सरोकारवालाहरु बीच छलफल भएपनि मेरो जीवनको मोल गर्ने काम बाहेक केही हुन सकेको छैन । एक वर्षको अवधिमा कयाैं वर्षको कठिन यात्रा बिताएको महशुस भएको छ मलाई ।
राधा यो समाजकी एउटी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । यस्ता कति राधा होलान् जसले वषौँदेखि यातना सहेर बसेका छन् । उसको आत्मवृतान्त सुनेपछि लाग्यो, राधाको मनमा यति ठूलो बदलाको भाव त्यसै आएको होइन । दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । हाम्रो रुढिवादी सोच कहिले बदलिएला मनमनै सोचमग्न भएँ ।
क्यान्सर जित्न सफल भयौ । अब आफ्नो अधिकारको लागि हिम्मतलाई सारथि निरन्तर बनाएर अघि बढिरहु राधा ।